Ajị anụ mbịne roba ọbụ, -eṅomi ehi akaị ọbụ, Ọgwụ na kpụrụ ọbụ - Aonaibao
Ajị anụ mbịne roba naanị
Eṅomi ehi akaị naanị
Ọgwụ kpụrụ ọbụ
Eṅomi ehi akaị naanị 02
Eṅomi ehi akaị naanị 01
Ajị anụ mbịne roba naanị 06
Ajị anụ mbịne roba naanị 05
Ajị anụ mbịne roba naanị 04
Ajị anụ mbịne roba naanị 03
Ajị anụ mbịne roba naanị 02
Ajị anụ mbịne roba naanị 01
Ihe niile si ele ihe anya nke mmepụta nchekwa, anyị na-eme ihe kasị mma anyị na-eje ozi na-arụ ọrụ.
Shandong Gaomi obodo Onaibao Labor Protection Products Factory bụ ọkachamara mmepụta na sales enterprise nke nchekwa akpụkpọ ụkwụ. Tọrọ ntọala na 1986, ụlọ ọrụ na-emi odude ke n'ebe ọwụwa anyanwụ development mpaghara nke Gaomi obodo na Shandong Peninsula mepere emepe agglomeration na mepere emepe njem. Ọ nwere a mmepụta ogbako ekpuchi ebe 8000 square mita, adaba njem na mepụtara lọjistik. Ọ bụ 10km si n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, 50km si Qingdao ọdụ na 80km si Qingdao n'ọdụ ụgbọ mmiri. The ngwaahịa na-ere ka otutu mpaghara.
Eṅomi ehi akaị naanị 03
Nhicha na Mmezi nke Nubuck Leathe ...
Nubuck akpụkpọ anụ bụ a akpụkpọ ụkwụ ihe enwetara site n'imeso akpụkpọ anụ ekpughe a mma n'anya na edo ákwà nke akpụkpọ anụ na mgbe ahụ dyeing ya, n'ihi na ndị siri udidi enye ndị mmadụ a oké na mmetụta ịhụnanya na-eme ka a akpụkpọ ụkwụ ihe onwunwe kasị mgbe hụrụ na akpụkpọ ụkwụ na oyi. The nubuck akpụkpọ anụ nke nchekwa akpụkpọ ụkwụ ...
Oke nke ụdị nchekwa akpụkpọ ụkwụ
Safety akpụkpọ ụkwụ, a makwaara dị ka nchekwa akpụkpọ ụkwụ, na-ezo aka na akpụkpọ ụkwụ na-eyi na dị iche iche ebe ọrụ ma ọ bụ mkpa iji chebe ụkwụ na ụkwụ si unan maka ụfọdụ pụrụ iche iche nke ọrụ. The nchekwa akpụkpọ ụkwụ nwere ike Olee ihe enyemaka kewara n'ime anọ ige. Dị ka dị iche iche ọrụ, dị iche iche iche iche nke safet ...
Adress: Xiao Nan'qu n'obodo nta, na emepe Mpaghara, Gaomi City, Shandong Province, China
Ekwentị: +86 18264680815